အမွငျ Archives - Page2of2- Kachin News Group (KNG) ,
မွနျမာပွညျရှိ နိုငျငံရေးပွဿနာ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု နှငျ့ စဈရာဇဝတျကြူးလှနျမှုမြား ဖွရှေငျးနိုငျရနျ ရိုဟငျဂြာပွဿနာ တဈခုတညျးမဟုတျဘဲ တိုငျးရငျးသားဒသေမှအရေးမြား ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးရနျလိုအပျကွောငျး နိုငျငံတကာကို ပွောဆိုနသေညျဟု ကခငျြအမြိုးသမီးအဖှဲ့ပွောသညျ။ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုဖွငျ့ ဂမျဘီယာနိုငျငံမှ မွနျမာပွညျကိုတရားစှဲဆိုထားသညျ့အမှုတှငျ ကွားဖွတျစီမံခကျြ (၄) ခကျြကို ဇနျနဝါရီ (၂၃) ရကျနေ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာတရားရုံး ICJ မှ ခမြှတျခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး မွနျမာပွညျတှငျး လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြားဖွရှေငျးရာတှငျ တိုငျးရငျးသားအရေးကိစ်စမြားကို ထညျ့သှငျးရမညျဟု ကခငျြအမြိုးသမီးအစညျးအရုံး ထိုငျးနိုငျငံ KWAT အဖှဲ့တာဝနျရှိသူ
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကို ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် လက်နက်ရောင်းချမှုကို ပိတ်ဆို့ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင် FFM က သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့ တောင်းဆိုလိုက်သည် ယင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများဖြင့် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအပေါ် ရက်ရက်စက်စက် စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မြန်မာစစ်တပ်က ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုထားပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမီတက် MEHL နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC
ကချင်ပြည်နယ် နောင်မွန်းမြို့နယ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံမူ လျော့ကျသွားသည်မှာ ၁၀ရက်ကျော် ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ဒေသခံများအတွက် အကူညီအထောက်အပံ့ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နောင်မွန်းမြို့ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းများထံမှ သိရသည်။ “စပါးကျီက ရေမြုပ်ကုန်တော့ စပါးတွေက နုံးနဲ့ဘာနဲ့ ဖြစ်နေပြီ။ စားစရာမရှိတော့ အဲဒီစပါးတွေကို နုံးပြောင် အောင်ရေနဲ့ဆေးချပြီး ကျက်ခိုးစင်ပေါ်မှာ မီးအပူနဲ့ခြောက်အောင်လုပ်ကြတယ်။ အဲစပါးတွေခြောက်မှ လက်ဆုံမှာပြန်ထောင်းပြီး စားနေကြရတယ်။ အရမ်းကို ခက်ခဲနေကြတယ်။ ရေမြုပ်တာတော့ အိမ်ခြေ ၂၁အိမ်ကျော် ဆိုပေမယ့်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ပမ္မတီးကျေးရွာအတွင်းရှိ စစ်ရှောင်စခန်းသည် စစ်ရှောင် ‘အတု’ မဟုတ်ကြောင်း ယင်းစစ်ရှောင်စခန်းအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် Assembly of God အသင်းတော်နယ်မြေ (၁၀)မှ ဥက္ကဌ သင်းအုပ်ဆရာတော် Rev. Dashi Tang Nau က ပြောသည်။ စစ်ရှောင်အဖြစ်နေထိုင်လာကြသည်မှာ ၁ နှစ် နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း ပမ္မတီးစစ်ရှောင်စခန်းသည် အစိုးရ၏တရားဝင်စစ်ရှောင်စခန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မခံရသေးသည့်အပြင် ‘စစ်ရှောင်အတု’ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည့်အပေါ် သင်းအုပ်ဆရာတော် Rev.
အမေရိကန်အစိုးရ၏ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ၄ဦးအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူလိုက်ခြင်းသည် အစိုးရကို ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားများကိုသာ ထိခိုက်စေမည်ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာကြီး Lazum Kam Hpang (လဇွမ်ကမ်ဖန်) က ပြောပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး စိုးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် သန်းဦး နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်အောင် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ “ပိုပြီး ဆက်နွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်
တိုက်ပွဲကြောင့် မြစ်ကြီးနား ပမ္မတီး နယ်မြေ (၅)သို့ ထွက်ပြေးလာသော ကဆုန် စစ်ရှောင်များသည် တန်းတူအခွင့်အရေးမရဘဲ မိုးကာတဲဖြင့် ၁နှစ်ခန့် ခိုလှုံနေရဆဲအခြေအနေပေါ် မေးခွန်းထုတ်နေကြပါသည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်း ၂၀ ကျော်တွင် ကိုယ်ပိုင်အဆောင်များဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ရသော်လည်း အဆိုပါ ပမ္မတီး စစ်ရှောင်စခန်းတွင်မူ အထပ်ထပ် ဖားထေးထားသည့် မိုးယို မိုးကာတဲတွင် မိုးရာသီကို ကျော်ဖြတ်နေရကြောင်းပြောပါသည်။ “ကျနော်တို့ကို အစိုးရက သီးသန့် ထောက်ပံ့ပေးတာက မရှိသေးဘူး။ ဟိုမှာ(နမ္မတီး)က ရေလွှမ်းမိုးဒဏ်ကို
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေ ၅ ခုတည်းတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်း မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ရပ်စဲသင့်ကြောင်း KIO တာဝန်ရှိသူ နှင့် ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီမှ သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်မျှော်လင့်ချက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အပစ်ရပ်ကာလ ၂ လထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ “အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းပေးတာကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအဝင် တနိုင်ငံလုံး
ဖမ်းဆီး အရေးယူမူ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မူးယစ်ဆေးကျဆင်းရေး ပြသာနာကို ဖြေရှင်းသည့်နည်း မဟုတ်ကြောင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး စကားဝိုင်းတွင် ဝိုင်းမော် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး သိန်းကျော်က ပြောဆိုသည်။ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့ ဝိုင်းမော် ရွှေညာင်ပင်ကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်် ကျေးလက်စကားဝိုင်း ဟောပြောပွဲတွင် မူးယစ်ဆေးလျော့ချရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောရာတွင် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ " ကျနော်တို့ ရမ်းဖမ်းဆီးချင်လို့ ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကလေးတွေဆိုလည်း ဖမ်းလို့ရတယ် ကလေးဥပဒေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ သူတို့ဘဝရှေ့ရေးရှိတယ်။
ကချင်စစ်ရှောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ မြေနေရာ ဆုံးရှုံးရမှာ စိုးရိမ်ခြင်းထက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့်သာ နေရပ်ပြန်သင့်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားကို ရောက်ရှိနေသည့် ဥရောပသမ္မဂအဖွဲ့ (European Union) သံအမတ် Kristian Schmidt ပြောဆိုသွားပါသည်။ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဥရောပသမ္မဂအကြောင်း နှင့် ပညာသင်ဆုများအကြောင်းကို မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများအား လာရောက်ရှင်းပြသည့် အစီစဉ်အပြီး သတင်းထောက်များကို သံအမတ်ကြီးက ပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “စစ်ရှောင်နေရပ်ပြန်မှုဟာ လုံခြုံစိတ်ချရပါမယ်။ ကူညီထောက်ပံ့မှုများနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ